Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo III, ikozvino inowanika kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo vhidhiyo mitambo yeGnu / Linux haina kuwanda. Kunyangwe zvinhu parizvino zvichichinja, chokwadi ndechekuti vhidhiyo vagadziri vemitambo vachiri kutora vashandisi veGnu / Linux uye vashoma vanorangarira MacOS. Asi zvishoma nezvishoma izvi zviri kuchinja.
Munguva pfupi yapfuura, iyo Feral Inopindirana kambani, inoona nezveWarhammer vhidhiyo mutambo saga, yakaburitsa zita idzva reGnu / Linux uye Mac OS. Uyu mutambo wevhidhiyo inonzi Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo III. Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo III ndicho chikamu chechitatu muWarhammer 40.000 akateedzana. Chikamu che chaiyo zano revhidhiyo mutambo uchave uripo yeDebian-based distributions uye yeSteamOS.
Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo III inoshanda chete neNvidia GPUs
Musoro unogona kutengwa chero kuburikidza neStam chitoro kana kuburikidza iyo yepamutemo Feral Inopindirana webhusaiti. Kunyangwe ichiwanikwa yeGnu / Linux, Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo III ine mutengo, mutengo we $ 59,9. Asi mune iyi kesi, semamwe akawanda mazita aripo eWindows, mutengo unokosha nekuti mutambo wevhidhiyo unoshanda pamwe nemitambo yemavhidhiyo yePlayStation 4 kana yeWindows 10. Kunyange zvakadaro, havazi vese vashandisi vanozokwanisa kugadzira kushandiswa kweWarhammer 40.000: Dawn yeHondo III pakombuta yako.
Kuti uyu mutambo wevhidhiyo ushande isu tinofanirwa kuve nemugove uri Ubuntu 16.04 kana zvakaenzana (iyo yazvino vhezheni yeDebian kana zvigadzirwa zvinogona kushanda), Intel i3-4130 3.4 GHz processor, 8 GB yegondohwe ndangariro uye 30 GB yekuchengetedza mukati. Uye zvakare, iyo komputa inofanirwa kushandisa iyo Nvidia mifananidzo kadhi, zvine mutsindo pamwe neNvidia 980Ti chip kana yepamusoro uye chakanyanya kukosha kuve neNvidia driver vhezheni 375.66.
Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo III haitsigire AMD kana Intel GPUs, rinova dambudziko hombe kune avo vanoshandisa iyi GPU, asi ichi chimwe chinhu icho kambani iri kuyedza kugadzirisa uye pamwe chinoshanduka mumwedzi mishoma. Chero zvazvingaitika, vateveri vesaga yeWarhammer havazove nedambudziko rekutamba mutambo wevhidhiyo uchangoburwa uye kuva neyeMahara komputa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo III, kunze ikozvino kweLinux
Pamwe iwe unofanirwa kuziva kuti AMD neIntel makadhi haana kutsigirwa zviri pamutemo neVulkan, kunyangwe iwo ari zvechokwadi ( https://jugandoenlinux.com/index.php/homepage/generos/estrategia/item/486-disponible-warhammer-40-000-dawn-of-war-iii-en-gnu-linux-steamos ). Muchiitiko cheIntel zviri panzvimbo peasidhi nekuti iyo furemu rate iyo inobvumidza inoita kuti isatambe http://phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Intel-Vulkan-DoW-3 )